Ngazi kanjani ukuthi kufanele ngithenge liphi ithubhu lebhayisikili? - Amabhayisikili
Main > Amabhayisikili > Amashubhu amabhayisikili - Imanuwali Ephelele
Amashubhu amabhayisikili - Imanuwali Ephelele
Ngazi kanjani ukuthi kufanele ngithenge liphi ithubhu lebhayisikili?
ungagcina kanjani ukuqina komzimba
Uma ungenalo ibhayisikili elibomvu, mhlawumbe unokuthile okusho ukuthi ama-26 x amanye amasentimitha futhi, ngakho-ke ngizokukhombisa izibonelo zokuthi yiziphi izinhlobo zamasondo alungile. Uhlobo lokuqala lwethayi ibhayisikili lakho elijwayelekile lomgwaqo.
Kungabuye kufane nebhayisikili labagibeli, ibhayisikili elihlanganisiwe, noma ibhayisikili ledolobha. Konke kufundwa kanjalo, ngakho-ke qhubeka uthole izinombolo ezithile odongeni lwethayi lakho bese wenzani? funa okuthile okusho u-700 xsomething c futhi lokho kungukufundwa kwesiFulentshi ngosayizi wamathayi 700, lapho ubukhulu bomkhawulo ungama-700, nokuthile okufana nalokhu 28c ububanzi besondo 700 ku-28c mhlawumbe uzoba Ama-700 ku-25cor 23c mhlawumbe no-32c 35c asho okufunayo futhi uzobathola kanjena-ke osayizi bamathaya abomvu abomvu uma usesha ku-google uma ungakwazi ukuthola ukuthi cishe uzoba yini nesondo elijwayelekile lase-europe? kanye nenhlangano yenhlangano ejwayelekile lokho okungamamilimitha angama-28 ukushuba, ngakho-ke njenge-28c kuzoba ngu-28-622 ububanzi borimu 622 wamamilimitha erimu lakho, kepha okufanele ukunake, ukukopishe lokhu bese uthola ukuguqulwa etafuleni elikule ncazelo engezansi bese uzama ukukuguqulela kunguqulo yesiFulentshi, uma namanje ungakutholi okunye kwalokhu, cishe isondo lakho lizoba ngamasentimitha amancane, okuyi-American version, kuzoba ngama-xa angama-28 . Qhubeka uthole lezo zinombolo bese uya etafuleni lokuguqula elikhona. Ingabe i-linki ikwenza ube munye noma ikuthumele isixhumanisi futhi yile ndlela othola ngayo usayizi wesondo lakho okulandelayo isondo lakho elijwayelekile lebhayisikili lezintaba lifana ncamashi ne-gi stas efanayo izibopho zebhayisikili lokugijima, ngakho-ke qhubeka uthole izinombolo ezimbalwa odongeni lwethayi lakho, ukuthi yini ozoyinaka, lokhu kuhluke kakhulu, ngenkathi ufunda inguqulo yesiFulentshi yamahhashi emabhayisikili futhi ufuna izinhlobo zaseMelika amabhayisikili asezintabeni angamaMelika angaka? zama ngamasentimitha bese uthola okuthile okusho okuthile okungama-26x, into ethi okuthile ngamasentimitha amahle, lena ayinalo uphawu lwe-intshi kodwa yilokho abakushoyo, 26 ingama-intshi angu-26 ububanzi ububanzi uxolo futhi ingxenye yesibili yenombolo ingu-1 , Ububanzi obungama-intshi angama-95 wesondo u-tie trimthat uhlobo losayizi owufunayo uma ufuna usayizi weshubhu, noma uma ungatholi ukuthi ungayithola inguqulo ye-etrto njengebhayisikili lomgwaqo kuzoba okufana no-53-55 953, u-53. kungamamilimitha ububanzi borimu bese u-559 kungamamilimitha angama-559 kububanzi bomkhawulo ngiyabonga ngokulalela ngiyethemba uzoziqonda kangcono izinhlobo zebhayisikili uma ungangithumeli ukuphawula komlayezo ngezansi ngaphandle kwale ncwadi ephephile
Yimalini ithubhu langaphakathi lebhayisikili?
Okunconoindlela yokuhlolausayizi ongakanani ngaphakathiishubhuokudingayo ukubheka ohlangothini lwecala le-eyakhoisondo. Abakhiqizi beTire baphrinta usayizi ezindongeni eziseceleni, ngakho-ke qaphela izinombolo ezifana ne-'700x23c 'yeukuumgwaqoibhayisikili, noma u-'26x1. 75 'engeyentabaamabhayisikili.
Kulesi sihloko sizokukhombisa ukuthi ungasusa kanjani uphinde ushintshe ishubhu elingaphakathi lesondo lebhayisikili. Sawubona uCalvin Jones lapha ePark Tool Company. Ake sihambe ngamathuluzi nezinsiza ozidingayo kuqala.
Uzodinga izigaxa zamathayi ukususa isondo kanye nepompo noma igobolondo le-CO2 ukufaka kabusha ipayipi. Ukuze ufunde ukuthi ungalikhetha kanjani isondo elihambisanayo nethubhu lesondo lakho, hlola le ndatshana yosizo yokulungisa ku-parktool.com.
Ngaso sonke isikhathi thatha i-spare tube uma uhamba. Uma kwenzeka kuba flatness, buyisela ngesipele bese ulungisa ipayipi elonakele ngokuhamba kwesikhathi. Ukuze uthole usizo ngokuchibiyela, bona le ndatshana, le nqubo idinga ukususa isondo.
Uma ungazi ukuthi ulisusa kanjani isondo ebhayisikili lakho, bukela le ndatshana: Okokuqala, qiniseka ukuthi ipayipi selikhishwe ngokuphelele. Susa zonke izigqoko zothuli. Uma impeller yakho ine-Presta valve, qala ubheke umuthi wokuphotha eceleni kwe-shaft.
Khulula futhi ususe le nati, bese ukhulula umakhiya okhiyiwe ekugcineni kwesiqu se-valve, cindezela isondo bese ucindezela noma imuphi umoya oweqile. I-valve yeSchrader ingahlanjululwa ngokucindezela i-plunger ku-valve. Okwe-valve yakwaDunlop, isikulufa sikaphethini amajika ambalwa nje bese udonsela ngaphandle kutiphu bese uphusha izinhlangothi zombili zethaya ulibangise maphakathi nomugqa ukuze ukhulule ubuhlalu ohlangothini lomphetho.
Sebenzisa i-lever yesondo noma yikuphi kusihlwa ngaphandle kwe-valve ngqo. Donsela emuva ubuhlalu bese uyiphakamisa ngaphandle komugqa. Susa isigwedlo sesibili ngamasentimitha ambalwa bese uphinda inqubo.
Qhubeka nenqubo uze uzwe ubuhlalu bukhululekile ngokwanele ukuze uslayida isigwedlo phezu kobuhlalu. Susa ubuhlalu besibili erimu, sebenzisa izigaxa zamasondo uma kunesidingo. Isondo kanye noshubhu manje sekususiwe ebhayisikili.
Manje sesizobuyisela ithubhu elibunjiwe ngethambo lakho lokufaka esikhundleni. Uma ungenayo ishubhu elisele, uzodinga ukulungisa ithubhu yakho ukuze ufike ekhaya. Ukuze uthole umhlahlandlela ophelele wokuchibiyela, uma unokuphazamiseka, ukwazi imbangela kungasiza ekuvikeleni ukuwohloka okuzayo.
Ngakho-ke hlola njalo izingxenye: isondo, ishubhu kanye nomgqomo. Uma kunokwenzeka, faka ipayipi okungenani kabili ebubanzini obujwayelekile bese uhlola ukuvuza; uma ufaka ipayipi kakhulu, ungabona izimbobo ezincane ku-hose. Yizwa futhi uzwe uma umoya uphuma kusuka ku-hose.
Qiniseka ukuthi uhlola lonke ipayipi. Kwezinye izimo, ukufaka ishubhu eligcwale amanzi ngaphansi kwamanzi kuzokwenza ukuthi kube lula ukuthola imbobo. Uma uhlela ukulungisa ipayipi, maka imbobo bese ukhipha ipayipi.
ama-disc disc amabhuleki
Uhlobo lomgodi lusitshela ukuthi ithubhu yagqobwa kanjani futhi isisiza ukuthi sivimbele okunye ukubhoboza. Umgodi omncane wenaliti kule tube ungakhombisa umgodi ngepini noma ngocingo oluncane - funa iphini, ucezu lwengcingo, ingilazi noma insimbi. Susa noma yini ongayithola.
Uma okuthile kunamathele kunyathela isondo kodwa kungadluli esidunjini, isondo alikho engcupheni. Susa into kunyathela. Ukusikeka okukodwa noma okumbalwa okufushane ohlangothini kukhombisa ukuthi isondo lishaye okuthile ngenkathi ushayela, isb.
B. umgodi noma itshe. Lokhu kwaziwa ngokuthi 'ukulunywa yizinyoka'
Nguyiphi ithubhu yangaphakathi yebhayisikili ehamba phambili?
?Amashubhu angaphakathingokujwayelekileizindleko$ 8. Okukhethekileamashubhu(ama-valve amade angeziwe, osayizi abangajwayelekile, ubufakazi bameva, njll.)izindlekoOkuningi.Amabhayisikilingamahabhu alungiselelwe ngaphakathi noma amacala amaketanga agcweleizindlekongaphezulu ngenxa yesikhathi esingeziwe, ubunzima, noma ukutholakala kwengxenye.
Siyabonga ngokujoyina namhlanje. Sizobuyekeza amashubhu wamabhayisikili omgwaqo iTubolito. Uma kunento eyodwa wonke umgibeli wamabhayisikili ayizondayo, kuyisondo eliqhuma ngenkathi uhamba.
Ngaphandle kokuthi unokusethwa okungenasifo, ishubhu esezingeni eliphakeme ibalulekile ukugwema ukuthamba isondo lakho. Ukuvela kweshubhu yenjoloba yendabuko ye-butyl, i-Tubolito tubing yakhelwe ukuba ibe lula, ibe namandla, futhi ihlangane kakhudlwana. Manje usuyabona, maqondana nokupakisha, amakhadibhodi alula ngempela anebhokisi lesamishi phakathi nendawo nebhande elincane lokulibamba.
Ungabona incwajana yokufundisa encane efihliwe lapha. Sinezinguqulo ezimbili, i-super-light S-Tubo kanye ne-Standard Tubo Road. Ngizokukhipha lokhu ebhokisini elincane, sizodlula kuma-specs.
Intengo yokuthengisa ingama- $ 34.90 enguqulo ejwayelekile yomgwaqo bese kuba ngu- $ 37.90 wenguqulo ekhanyayo, ebiza kakhulu kunethubhu ejwayelekile, evame ukubiza amadola ayisithupha noma kuze kufike kumadola ayishumi.
Atholakala ebangeni lobude bevalve obungu-42, 60 no-80 mm. Zakhiwa kusetshenziswa ukwakheka okuphathelene ne-thermoplastic elastomer ngalowo mbala osawolintshi. Zihlangene kakhulu, okusobala kakhulu enguqulweni ye-S-Tubo, futhi nenguqulo ejwayelekile iyikota elingana nosayizi webhubhu ejwayelekile.
Kufanele futhi ziqine ngokuphindwe kabili, okungukuthi, ama-punctures amaningi, ukuvikelwa okungcono kokubhoboza nokumelana okungcono, konke ngentengo ephezulu.
Futhi zenziwa eYurophu, okusho ukuthi ukulawula ikhwalithi ephezulu. Manje ake sibheke isisindo salezi zigaxa. Inzuzo enkulu yalezi hoses isisindo sabo esincane.
ingcindezi yamathayi e-fixie
Ngakho-ke sikhumula iringi elincane lepulasitiki le-super light version, enesisindo esingama-gramu angama-22 futhi equkethe uphawu oluncane lapha, okuyisikhala senothi lenyunyana kanye nekepisi le-valve. Uma sibheka i-40 gram Tubo Strait ejwayelekile, ayakhanya kakhulu, kepha lokho kungenxa yegasket encane egcina ikepisi. Ukuqhathanisa nje, nansi ipayipi eligijima iVittoria, elikukhombisa ukuthi likhulu kangakanani futhi elikusikali esingu-108, ngakho-ke ulondoloza isisindo esincane, yize ukwazi ukushayela ngamaphampu e-latex, kepha yeka ukumelana nokubhoboza.
Noma ngabe ukhipha impahla kuyahlaba umxhwele impela ukuthi la mashubhu ahlangene futhi ahlanganiswe kanjani amancane nombala wewolintshi owahlukanisa ngempela namanye amashubhu asemakethe. Ukwahluka esinakho lapha kungama-valve amamilimitha angama-60 ukuze ubone ukuthi mude impela, awufundwa futhi awashintsheki. Izinhlobo zebhayisikili lezintaba zinomsuka we-valve ongasuswa wezinhlelo zokusebenza ezingenamathambo.
Okupholile ngempela ngayo impahla ye-TPU eyihlukanisa ngempela futhi ungabona lapho uyivula, mncane kakhulu futhi u-opaque eceleni kwe-tint orange. Esikhundleni sefindo lokugcina lendabuko kanye ne-valve enentambo, lapha unophawu lwenjoloba olulula ongalulahla phansi. Iyisiyingi sothuli esilula ngempela futhi esinekhanda elijwayelekile le-Presta valve.
Uma uhlanganisa lokhu ndawonye ne-hose ejwayelekile, kuyamangaza nje ukuthi bangaba bancane kangakanani. Uma uke wagibela ibanga elide ngaphambi kokuthi wazi ukuthi ukuphatha amashubhu amaningi kungathatha isikhala esiningi futhi ngamashubhu we-tubolite ukhokha imali enkulu, kepha lokho kusho ukuthi empeleni ungapakisha ezimbili noma ezintathu zalezi esikhundleni sethubhu elilodwa , okusho ukuthi ohambweni olude ungavikelwa kangcono uma kwenzeka uthola amafulethi. Kuyamangaza futhi ukuthi bathi ukumelana nokubhoboza okungcono kunombhobho ojwayelekile, ngakho-ke akulula nje kuphela futhi mncane, kepha ngenxa yezinto ezibonakalayo ungagwema isihlabathi esicabalele, futhi esandleni kufana nokwakhiwa kwerabha, okuyiqiniso mncane futhi kulula ukugoba.
Manje itholakala kuphela nge-orange. Ngakho-ke uma ungumgibeli wamabhayisikili wesitayela futhi ungafuni ukuthi iveluvu ye-orange iphume, lokhu kuyinkinga. Ukumaka la mapayipi, empeleni udinga ukusebenzisa i-Tubolite's Flix kit, ebiza kancane kakhulu kunepaki ejwayelekile yenjoloba e-vulcanizing, kepha yakhelwe ngqo la mapayipi ngakho-ke nakanjani kunikezwa noma kuthathwe.
Kuyabiza impela futhi uma ungumuntu oshayela kakhulu futhi okhokhela cishe ama- $ 35 nge-hose kuyinto encane, kepha ngokuhamba kwesikhathi, ukumelana nokubhoboza okungcono kanye neqiniso lokuthi ungakwazi ukukufaka kalula kangaka kungakuthola ngempela ukuhamba, kusho ukuthi ungahamba nabaningana ohambweni olulodwa esikhundleni sokuthola ifulethi futhi unxuse omunye umgibeli webhayisikili ngesichibi noma ngepayipi. Enye into ebengifuna ukuyibukisa ngala mashubhu ukuthi aqoqa kahle kanjani. Ngakho-ke lapha nginesikhwama se-Topeak burrito, isikhwama semali esisesilinganisweni esiphakathi, futhi ngizokukhombisa ukuthi ngingawafaka kanjani amapayipi amathathu esikhundleni selilodwa.
Uma ngivula lokhu, inamagumbi amathathu futhi uyabona manje ukuthi ngiphethe ishubhu elijwayelekile elikhulu impela. Kuthatha isikhala esiningi, ayikho indlela engingafaka ngayo ezimbili kulokhu ngakho ngivele nginamathisele lena bese ngithatha iTubolite engingayibeka nje phezulu futhi manje usuyabona ukuthi ngingathola yini efulethini banezipele ezimbili ngaphezulu. Uma unayo eyodwa kuphela, ungayifaka kalula okokuqala lapho uyifaka, ngakho-ke ukuba nesipele kutholakala kalula kakhulu noma kuhambo olufushane.
Manje ake sihambe ngobuhle nangobubi bamashubhu omgwaqo waseTubolite. Esikuthandayo ngabo ubukhulu bazo obumbene. Cishe ziyikota elingana nosayizi wepayipi lenjoloba yendabuko, ngakho-ke kulula kakhulu ukupakisha futhi zithathe isikhala esincane kakhulu.
Futhi ahlala isikhathi eside kunamashubhu wendabuko, okungukuthuthuka okuhle, futhi eza ngobude obuhlukahlukene ukuze nakanjani uthole okulungile kwi-wheelet yakho. Okunye ukwehliselwa phansi kwabo iqiniso lokuthi kubiza kakhulu. Ngaphezulu kwama- $ 35, ifulethi ngalinye libiza imali impela futhi ikakhulukazi uma ushayela kakhulu.
Akunangqondo ngempela ukushayela kuphela nalezi. Uzodinga futhi amakethi akhethekile weFlix Kit patch. Ngakho-ke uma uthenga elilodwa lala mashubhu uzodinga ukuthenga nekhithi yama-patch.
Ngemuva kwakho konke, zitholakala kuphela kulowo mbala we-orange, okusho ukuthi isiqu se-valve naso siwolintshi. Uma ubheka konke, amashubhu wokugijima we-Tubo angathola amaphuzu ayi-7.8 kwangu-10.
Lokhu kuyabiza impela, kepha usayizi wazo ohlangene nokwakhiwa okuyingqayizivele kubenza babe ishubhu elifanele lokushintshwa. Ngenkathi singeke sithathe indawo yawo wonke amapayipi ethu ajwayelekile, kunengqondo impela ukuthenga ezimbalwa zalezi bese uzifaka esikhwameni sakho sesihlalo. Siyabonga ngokubuka lesi sibuyekezo.
Ungathola okunye okuqukethwe kithi kuwebhusayithi yethu ku-thesweetcyclists.com noma usilandele ku-Instagram ku- @ TheSweetCyclists.
Lona umgibeli wamabhayisikili omnandi ekukhumbuza ukuthi ukujabulele ukugibela!
Isondo lamabhayisikili lami lidinga liphi usayizi webhubhu?
IKENDA ROADIBHAYISIKILI TUBE
I esitebeleni umfutho womoya butylishubhu lebhayisikiliilingana no-700cisondo. Njengomunye weamashubhu amabhayisikili amahle kakhulu, ungakhetha umgwaqo wakho weKendaIshubhu Lebhayisikiliaqukethe i-48mm Threaded Presta Valve. I-valve ebushelelezi yenza kube lula ukusebenzisa ipompo yakho yomoya noma nini lapho idingeka.
Ngabe amashubhu webhayisikili eWalmart mahle?
Laboamashubhu we-walmartuzokwenza kahle, inqobo nje uma ungavumeli noma ubani abone ukuthi uyazisebenzisa.12.09.2008
Ngabe i-700C ifana no-29?
29'(Usayizi we-ISO 622) empeleni yiyonangokufanayousebe ububanzi njengoba700C, yize iningi29amathayi ngeke alingane700Camarimu emigwaqo ngoba abanzi kakhulu.29'amathayi athandwa kakhulu kubhayisikili bezintaba; cinga29'MTB.700C(Usayizi we-ISO 622) usayizi osetshenziswa kakhulu kumabhayisikili emigwaqo yanamuhla.
Ngabe amathayi ebhayisikili eza namashubhu?
Iningiamabhayisikilinamuhla babeamathayingeamashubhungaphakathi. I-ishubhuyenziwe ngenjoloba, ine-valve kuyo yokwehla kwamandla emali, futhi isayizi nosayizi ofanele nje ukulingana ngaphakathiisondo. Lapho ufutha kakhuluamathayi, empeleni ushaya umoya ungene ku-ishubhungaphakathi kwe-isondo, okugcwalisa ifayili le-isondo.
Ingabe i-Target ithengisa amashubhu angaphakathi ebhayisikili?
Ngabe amanye amashubhu angaphakathi angcono?
Amashubhu angaphakathiyenza okuningi kakhulu kunokugcina ubambe umoya kumathayi akho. I-amashubhu angaphakathi angcono kakhuluingenza ibhayisikili lakho lisheshe, likhanyane noma ngokuvimbela amapayinti athembeke ngokwengeziwe.04.29.2021
amaprotheni powder amantombazane
Ngidinga liphi ithubhu losayizi webhayisikili elingu-26 intshi
Isibonelo, enye yezintandokazi zethuamashubhuyi26x 1.75-2.125 okusho ukuthi kufanelana no26-intshi ubukhuluukukhathala ngeububanziebangeni le-1.75 kuya ku-2.125amasentimitha.
Luhlobo luni lweshubhu elisetshenziswa yibhayisikili lasentabeni?
Amashubhu webhayisekili lomgwaqo namashubhu amabhayisikili asezintabeni asebenzela inhloso efanayo, ukudala uphawu kusondo lakho lebhayisikili. Ishubhu lebhayisikili liyibhola le-butyl noma ibhaluni yenjoloba ye-latex emise okwe-donut futhi ine-valve yokwehla kwamandla emali.
Likhulu kangakanani ithubhu lebhayisikili elingu-26 intshi?
I-LLH2K Bike Tube 26 x 1.95 26 Inch Bike Tube 2 Pack - Ibhayisikili Tube 26 x 1.95 nge 3 Tyre Levers, 6 Round Patches - Futhi Ilingana 26x1.90 26x2.10 Bike Tube 26 x 1.95 - Anti-ukuguga 26x2.125 ibhayisikili tube. . . . . .
Ungakwazi ukubeka amashubhu ngebhayisikili?
Gcina amashubhu webhayisikili - awusoze waba nokuningi kakhulu. Kusukela emabhayisikili wezingane kuya kuma-rigs okumiswa ngokugcwele sinamashubhu kuwo wonke amabhayisikili. + - Loading lindokuhle khozaPublic